आरोहण शुरु, ८ शेर्पा आरोही सगरमाथाको चुचुरोमा – NepalayaNews.com
३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १४:४५
वैशाख ३१, काठमाडौं । वसन्त ऋतुको यस याममा सगरमाथाको आरोहण शुरु भएको छ । आठ शेर्पा आरोहीले मंगलवार अपराह्न १ः४५ बजे सगरमाथाको चुचुरो (८,८४८ मि) मा डोरी टाँगेसँगै सगरमाथा आरोहणको ढोका खुलेको हो ।
गत वर्ष पनि वैशाख ३१ गतेदेखि सगरमाथा आरोहण शुरु भएको थियो । पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले मंगलवारदेखि आरोहण शुरु भएको जानकारी दिए । संखुअवासभाका सिद्धिबहादुर तामाङ नेतृत्वको शेर्पा समूहले डोरी टाँग्ने काम (रोप फिक्सिङ) गरेको थियो । उक्त समूहमा सोलुखुम्बुका पासदावा शेर्पा, सोलुखुम्बुका दोजी ग्याल्जेन शेर्पा र दावा नोर्बु शेर्पा तथा संखुअवासभाका क्रमशः मिङ दोर्जी शेर्पा, आङ फुर्वा शेर्पा र साङ्बु भोटे लामा छन् ।
उनीहरु ‘हिमालयन गाइड्स नेपाल, ट्रेक एन्ड एक्सिपिडिसन प्रा.लि. र मेडिसन माउण्टेनरिङ एभरेष्ट एक्सिपिडिसन–२०१९’ बाट गएको सगरमाथाको आधार शिविरमा रहेका सम्पर्क अधिकृत ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए । सगरमाथा आरोहणका लागि डोरी टाँग्ने काम एक्सिपिडिसन अपरेटर्स एशोसिएशनले गर्दै आएको छ । सगरमाथाको शिविर–२ सम्मको बाटो बनाउने जिम्मा सगरमाथा प्रदूषण नियन्त्रण समिति (एसपिसिसी) पाएको थियो । विभागका अनुसार सगरमाथा आरोहणका लागि ४१ आरोही समूहका ३७८ आरोही गन्तव्यतर्फ गएका छन् । यसमा ३५ विदेशी र छ नेपाली आरोही समूह छन् ।
विभागका अनुसार सगरमाथासहितका हिमाल आरोहणका लागि यस याममा कूल १०६ आरोही समूहका ८४२ आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । सगरमाथासहितका २८ हिमाल आरोहणका लागि नेपालसहित ४८ मुलुकका आरोही हिमाल आरोहणमा निक्लिएका छन् । यस याममा हिमाल आरोहणबाट करीब रू. ५० करोड सलामी दस्तुर जम्मा भएको छ । यसमा सबैभन्दा धेरै रू. ४३ करोड ८९ लाख २७ हजार सगरमाथाबाट मात्र छ । रासस
कस्केली समाजद्वारा दर खाने कार्यक्रम ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १४:४५
पानी जहाज नछोड्न अमेरिकाले गरेको आग्रह अस्वीकार ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १४:४५
यूरोपको आयातकरले घटायो अमेरिकाको ह्वीस्की निर्यात ३१ बैशाख २०७६, मंगलवार १४:४५